Podcast 9x21: HomePod hongu, HomePod kwete | IPhone nhau
Podcast 9 × 21: KumbaPodhi hongu, KumbaPodhi kwete
Ongororo dzekutanga dzePambaPod dzinoenderana nehunhu hwayo, kupfuura vamwe vatauri vari muchikamu chayo nemutengo, zvisinei, Consumer Reports inopesana nekuongororwa kwese kwakaitwa kusvika pari zvino uye inovimbisa kuti yakaipa kupfuura Google Home Max kana Sonos 1. Ndiani achange akarurama? Uye kana izvo zvisina kukwana Apple's speaker speaker ikozvino inoita kunge inosvibisa pamusoro peimwe fanheni kana vhoriyamu. Zvese izvi uye dzimwe nhau nezve Apple uye tekinoroji muchikamu chevhiki rino.
Pamusoro penyaya uye nemaonero enhau dzevhiki, isu tichapindurawo mibvunzo kubva kuvateereri vedu. Tichava ne hashtag #podcastapple inoshanda muvhiki rese paTwitter kuti ugone kutibvunza zvaunoda, tipe mazano kana chero chii chinouya mupfungwa. Kukahadzika, dzidziso, maonero uye kuongorora kweanokumbira, chero chinhu chine nzvimbo muchikamu chino chinotora chikamu chekupedzisira chedu podcast uye chatinoda kuti utibatsire kuita vhiki rega rega.
Sezvo isu takatotanga mwaka wadarika, gore rino iyo Actualidad iPhone podcast inogona kuteverwa mhenyu kuburikidza neyedu YouTube chiteshi uye kutora chikamu mairi kuburikidza nekutaura nechikwata chePodcast nevamwe vanoona. Nyorera kuchiteshi chedu kugamuchira notices dzekuti iko iko kurekodha kwepodcast kunotanga, uyezve patinowedzera mamwe mavhidhiyo atinoparidzira mairi. Ehezve icharamba iripo paTunes kuti iwe ugone kuiteerera pese paunoda kushandisa chaunofarira kunyorera maPodcasts.. Tinokurudzira kuti iwe Nyorera paTunes kuitira kuti zvikamu zvidzururwe otomatiki kana zvangowanikwa. Iwe unoda kuinzwa iko iko kuno? Zvakanaka pazasi pane iwe une mutambi kuti azviite. Isuwo tine Playlist paApple Music nemumhanzi unotamba pane podcast.
Podcast: Tamba muhwindo idzva
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Podcast » Podcast 9 × 21: KumbaPodhi hongu, KumbaPodhi kwete
Iwo maPodcast mukushandisa kwechizvarwa che - rega kurota muminiti 27
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, unogona kuikanda zvakare?
Mutengo weiyo HomePod unokwira kusvika ku $ 216
Apple inotangisa webhusaiti nyowani yeAugmented Reality pane iOS